I-Sugarlove1 ᐅ I-Sugar Momma, i-Daddy ne-Baby Online Sites Izindawo
Amasayithi Wokuphola Ushukela
Finyelela Amaqembu e-VIP
Khulisa ukubonakala nge-90%
➤ Joyina ama-VIP!
➤ Joyina i-Sugarlove1
Yamukela, Ingqondo, Umzimba Nomphefumulo!
Laim Funa i-Soulmate yakho
Register Ukhohlwe iphasiwedi Thumela kabusha ikhodi yokuqalisa
Ngo amaposi atholakele.
Akukho okunye okuzobonisa.
Bika okuqukethwe kokuphatha
- khetha isizathu - UgaxekileIsikhangisoUkuhlambalazaOkungalungile Okuqukethwe / OkungafanelekileUmculi weConIzincwajana zemininingwane
ERROR: Sicela ukhethe Isizathu Sokubika. ERROR: Sicela ugcwalise isizathu sokubika.
Facebook Twitter LinkedIn Reddit Pinterest WhatsApp Amabhukhimakhi e-Google
Uqinisekile ukuthi ufuna ukususa lokhu?
Uqinisekile ukuthi ufuna ukususa iphrofayela yakho?
Lokhu kuzosusa konke okuthunyelwe kwakho, ulwazi olulondoloziwe bese ususa i-akhawunti yakho.
Lokhu akukwazi ukuhlehliswa.
Susa iphrofayela yami
PublicAmalungu eSayithiAbangani KuphelaNguye kuphela
Yamukela Ingqondo, Umzimba Nomphefumulo
➤ Mangalela Umlingani Wakho Oyithandayo!
Umqeqeshi Wakho Wokujola Womuntu Nengqondo, Umzimba Nomphefumulo Guru Sugarlove1
Funa Ukuhlelwa Ngokwemigomo Engazuzisayo
Sifuna ubudlelwano obulinganiselayo, ngakho-ke sinikeza amalungu ethu isiza esisebenza ngokugcwele kanye nokufaka isicelo salokhu ukuthi kwenzeke. ISoul Sessions yethu ivumela imimoya engaba izihlobo ukuthi iqondane futhi iyeke ukuchitha isikhathi. Ibavumela ukuthi bachaze ngokushesha abakudingayo, abakufunayo nabakulindele ekuhlelweni kobudlelwano okususelwa kwimigomo ezuzisayo.
Hlangana Nezingoma Endaweni Yakini!
Lesi siza ngesinye sezingosi ezihamba phambili zokuqomisana zamazwe omhlaba. Noma ngabe ufuna iflashishi esheshayo, ukuqomisana asebekhulile noma uthando!
Abantu Babuye Babuza
➤ Ukhokha Malini UShukela Daddy noShukela Mama?
➤ Wenzani uShukela Daddy noShukela Mama?
➤ Ngimthola Kanjani uSugar Daddy noSugar Mama?
➤ Ungakanani uSugar Daddy noSugar Mama?
➤ Ingabe Kulungile Ukuba NoShukela Daddy noSugar Mama?
➤ Ungangena Yini Enkathazweni Yokuba Ushukela Wengane?
➤ Ngabe Izingane Eziningi Ezinoshukela Zikhokhelwa Kanjani?
➤ Ngabe Ushukela Izingane Zithola Malini Ngosuku?
➤ Yisiphi Isabelo Okufanele Ngisicele Ingane Enoshukela?
➤ Siyini Isabelo Esihle Samasonto onke Sengane Enoshukela?
SiseSugarlove1 Amasayithi Wokuphola Ku-inthanethi angakusiza wenze izinqumo ezifanele noma ngabe uzizwa wesaba, unamahloni, udidekile noma ukhungathekile! Abantu abaningi abanakho ukuqonda ukuthi baphuma nobani, bagqokeni, bathengani nokuthi kungani!
Yenza ukuvuselela imicabango yakho nokukhetha kwakho iSugarlove1 kube ngumuzwa omnandi, ophephile futhi oziqinisa ngempela.
Impilo ayiphelele, kepha iDater yakho eku-inthanethi, Ushukela Baby, Sugar I-Momma & Sugar Ingqondo kababa, Umzimba Nomphefumulo kungaba njalo.
Hlela kabusha i-Sugar Daddy, i-Sugar Momma nama-Sugar Baby Values!
You kufanele ube nomqondo ohlanzekile wenhloso yokufuna i-sugarlover yakho nge-Meetup & Hookup Dating App / Site. Ngakho-ke khetha indlela yakho ngokusetha kabusha futhi uchaze kabusha amanani akho ayisisekelo.
Yeka ukuMisa futhi ujoyine i-Sugarlove1
Ukhathele ukufuna ibalula ngaphandle kwempumelelo? Zama kahle iSugarlove.yodwa!
Ukubukeka kwakho nokugqoka kanye nendlu yakho, imoto nezinye izinto ezibonakalayo kusiza "isithombe" sokuthi ungubani emhlabeni wangaphandle.
Kodwa-ke, ingabe uyaqiniseka ukuthi "isithombe" sakho ukuphela kwento oyiyona? Noma kufanele ngabe utshala imali engqondweni nasemphefumulweni wakho? Thola i-Sugar Daddy, i-Sugar Momma ne-Sugar Baby Soulmate ukuze uxhumane nayo ngengxoxo yethu yohlelo lokusebenza lothando lwe-Sugar.
I-Sugarlove®, Isixhumi # 1 Somphefumlo!
Okokuqala kweSugar Daddy & Sugar Momma ngabazali bakaShukela okuthi kuBantu Abathandanayo Bokushukela babophezeleke ukuthi bakhokhele Isibonelelo Sabantwana Abashukela ukuze bakwazi ukuya kwi-HookUp MeetUp futhi bagcine isithandwa sikashukela esincane nesikhangayo.
Kodwa-ke, i-Organic Sugarlove® ayiphathelene nesibonelelo samasonto onke noma sanyanga zonke nezinye izimfanelo ezingasho lutho, ngoba idinga ukuchazwa kabusha kwamaSuar Baby, Momma & Daddy Values.
Lokhu kufaka phakathi ukuthi uyeke izintandokazi zakho, ukuze ukwazi ukusetha kabusha ukucabanga kwakho. Ngoba Ingqondo, Umzimba Nomphefumulo wakho kuyinto eza kuqala kungagcini nje esithombeni esiphoqelelwa kuwe ngabezindaba nabanye abasetha ukuthambekela njengama-fashionistas njll. Ngazo zonke lezi zinqubo ezihloliwe usukulungele ukuqala Ukuqomisana ngaleyo ndlela uqale amaSoul Sessions.
Joyina i-Sugarlove® Meetup & Hookup Online Sugar Love Ukuqomisana App / Site Manje
Dala iphrofayili Yesayithi Yokuqomisana eku-inthanethi ekhombisa wena namanani akho we- "CORE" kanye nezifiso ezingokwenyama umuntu ongaba nomphefumulo okufanele ahlangane naye. Khumbula ukubhala incazelo yephuzu esigabeni esithi "Mayelana Nami", ngoba ama-Sugardaters angaba khona ayifunda ngeSugar Momma Chat & Sugar Daddy Chat. Imali yakho engenayo nezinye izithiyo ezingaphezulu akusadingeki, ngoba ukugxila kwakho okukhulu ubunye obuphakeme bokuthi "Ingqondo, Umzimba Nomphefumulo". Joyina mahhala “MANJE” ngokwakha i-akhawunti!
Impilo ayiphelele, kepha iSugarBabies yakho, iSugarMommas & Sugar Daddies Ingqondo, Umzimba Nomphefumulo kungaba!
I-Sugarlove® iyiphayona phakathi kweShukela Dating Sites / Izinhlelo
Asisahlukanisi ama-sugarlovers abe yiSugardaddy eyizitabane, uSugarmomma wezithandani noma uSugarbabe wezitabane / ongqingili. Kungani, ngoba iSugarlove imayelana nokuthola iSoulmate kuqala, ukuze ingqondo nomzimba kulandele ngendlela enempilo nephilayo. Kusukela manje "Ukukhululwa Kokuphakanyiswa (Ngokwesiko)".
ISugarlove® ihlanganisa iSugar Daddies, iSugar Mommas & Sugar Babies nge-Online Dating Sites Chat ngaphandle kokubheka iminyaka, isizinda noma isiko. ISugarlove® iyiwebhusayithi / uhlelo lokusebenza olunemisebenzi eminingi ngenhloso yomphefumulo yokuxhuma amaSoulmate emhlabeni owaziwayo nangale kwawo.
Amathiphu we-6 Sugarlove®: Ukwabelana Ngendlela Yakho Yokuphila Nomndeni Nabangane
Ingxoxo yobusuku obumnandi ye-Sugar Babies ihamba kanjena. "Uzithathaphi lezo zicathulo zeChanel?" noma okungcono nokho, "Uyikhokheleni leyo sikhwama sikaLouis Vuiton?" Imvamisa, izindlela zokushukela zikababa ezinoshukela kanye / noma omama abanoshukela aziyona into ongakwazi ukuyikhokhela wedwa!
Ngiyingane enoshukela ngokuzikhethela ngakho-ke njalo ngithola imibuzo ehlala iqondiswe endleleni yami yokuphila ye-Meetup & Hookup.
Ezinganeni ezimbalwa ezinoshukela, cishe akunzima neze ukwaba nemindeni yazo lapho ushukela uvela khona… noma kunjalo uma ukulesi simo sami, khona-ke ukwaba nabangane nomndeni kuyinselelo enkulu okufanele uyihlule!
Enye into ukufaka abangani bakho, omunye ngumndeni wakho! Kungakho ngincoma ukwephula iqhwa nabangane bakho kuqala. Noma ngabe ukhetha ini, nazi ezinye izeluleko ezimbalwa okufanele uzicabangele:
Tshela & Yazi UnguKaputeni Womkhumbi Wakho, Uma Kufika Ku-Meetup & Hookup's
Kumele wabelane ngokukhetha kwakho ngendlela yokuphila nalabo abangabuza imibuzo efana nabangane bakho abasondelene nomndeni.
Ngiyabheja uma uyingane yabesifazane enoshukela nokuthi akuwona wonke umuntu owaziyo ukuthi umjikelezo wakho ukuphi? Noma kunjalo, ngiqinisekile ukuthi abangane bakho abambalwa benza futhi mhlawumbe umama wakho noma ugogo wakho! Ngaphezu kwalokho, ngincomela ukubacela ukuthi bahloniphe izinqumo zakho nobumfihlo bakho.
Khuluma Iqiniso Ngaphandle Kokwabelana Zonke Izimfihlo Zakho mayelana ne I-Meetup & Hookup's Ukuqomisana App / Site, kodwa zama ukungabi namanga.
Ukusho izinto ezinjengokuthi “Hhawu, umngani wami omkhulu usanda kungithengela lewashi legolide” noma “Yebo, ngawela kulawa matwala e-“ King Of Bling ”AKA Jacob The Jeweler” kuyindawo ethambekayo. Kuholela kuphela ophenyweni lwakho.
Ngokwami, ngiyakutshela njengoba kunjalo. Ngijola, ngihlangane futhi ngihlanganise amadoda kanye / noma abesifazane abavuthiwe emicimbini esezingeni eliphakeme ngayo yonke into ekhokhelwe. Isibonelo, uma ngiya edilini le-VIP noSugar Daddy Lover. Ingubo yami, izicathulo, izesekeli njalonjalo kuyakhokhelwa futhi kungokwami ​​ukugcina.
Ngibatshela ukuthi ezinye zezimpahla zivela emicimbini nokuthi ezinye izipho ezivela kubungani nasekuxhumaneni. Uma kunjalo!
Kuyingxenye elula, kepha kungaba nzima ukuchaza isici sezezimali. Ngokudabukisayo, abanye abantu osondelene kakhulu nawe bazokuhlukanisa ngezigaba njengabaphelezeli, kepha lokhu kumane nje kungukungazi. Basuke becabanga futhi sonke siyazi ukuthi isisho sihamba kanjani… “Ukucatshangelwa Ngumama Wabo Bonke AbangamaF **** Ups”!
Dwebela ukuthi unobungani besikhathi eside ngokusebenzisa Amasayithi Okuhlangana Wokuhlangana We-Meetup & Hookup naku-bond okuholela ku-sugarlove. Zwelana ngokuzuzisana kwemibandela yobudlelwano. Njengokuthi wena nomzali wakho ongushukela niyasizana ukufeza izinhloso zakho, okuyi-100% eyiqiniso.
I-Sugarlover ne-Sugarlovers yeSugarlove®, ungazenzi iphutha uma ufuna uhlelo lokusebenza / isayithi lothando lukashukela!
Kwesinye isikhathi abantu benqaba ukuqonda noma ngabe kungenacala kangakanani. Abakwazi nje ukuqondana nendlela yakho yokuphila futhi kulungile. Awukwazi ukubanqoba bonke.
Njengakuma, uma abangane bakho nomndeni wakho bengekho 100% ngakho, qaphela lapho ubabaza.
Kimi, ngingumfundi wesikhathi esigcwele kanye noshukela. Akuyona into enkulu abazali bami engikhathazeke ngayo uma ngithumela isithombe somgexo wami omusha we-iPhone nomgexo wedayimane. Ngikhathazeka kakhulu ngabantu abashesha ukwahlulela.
Indlela yokuphila ye-Meetup & Hookup Yezingane Ezinoshukela Ekusizeni Kwezingosi eziku-inthanethi
Bambalwa abantu abangazi njenge-sugarlover futhi abantu abaningi njengomfundi wakho wasekolishi ojwayelekile, ngakho-ke ngiyaziqhenya ngokubukeka njengami. Kwesinye isikhathi kuzoba nesifinyezo sami sikhanyisa ushukela wami, kepha kaningi kunalokho, kumayelana nokuxubana.
Vumela ukuthobeka kube yiphuzu lakho eliqinile, ngenkathi uvimba izitha nabanye abantu abahlulela. Ngikhanyisa ngokwanele ukugcina abantu bebuza, kepha akukho okungaphezulu kwaphezulu.
Bazise ukuthi Kungukukhetha kwakho ukuhlangana noma ukubheka ama-Sugarlovers ngokufuna ukubuyekezwa kohlelo lokusebenza loshukela
Awufuni bacabange ukuthi uxhashazwa ku- I-Meetup & Hookup Ukuqomisana App / Site. Kwenze kucace bha ukuthi lolu wuhambo lwakho futhi unquma ngokubazisa ukuthi nguwe olawula izenzo zakho. Bangakhululeka nje ngokukhetha kwakho indlela yokuphila.
Baqinisekise Ngokuphepha Kwakho
Abangani bami nomndeni wami babekhathazekile ngokuphepha kwami, lapho ngihlangana ne-Hookup ku-a Ukuqomisana App / Site. Lokhu kuyaqondakala ngokuphelele. Kungakho ngithatha ukuqaphela:
Esimweni lapho kufanele kwenzeke okungahambi kahle, othile uhlala eyazi indawo yami ngqo.
Nginegama lekhodi noma i-emoji ethile engiyithumela kubangani nomndeni uma ngisengozini futhi bayazi ukubiza amaphoyisa bawathumele endaweni engqoqiwe lapho ngihlala khona.
Ngine-tracker ye-GPS ku-smartphone yami, ngakho-ke ngitholakala ngabangane nomndeni ngisho namaphoyisa ngemizuzu engaphansi kwengu-2.
Lapho nje abangane bami nomndeni wami bethola ukuthi lezi zinyathelo zithathiwe, bazizwa bekhululekile ngokwengeziwe ngoshukela wami.
Ake ngiphethe ngokuthi, noma ikuphi ukukhetha kwendlela yokuphila akumele kujatshulelwe buthule. Kungani, ngoba kulula nje ukuba nabangane bakho nomndeni wakho ungene ebhodini. Kungakho kungcono ukukhuluma ngokungagunci, ngoba kuyasiza ukwenza abantu obathandayo bangene endleleni yakho yokuphila. Ikakhulukazi lapho bebuzwa ngawe.
Ushukela1 | Ushukela Momma, Daddy & Baby Ukuqomisana Amasayithi
Ukuhlangana Kwasendaweni Nokuhlangana Kwamashukela Ama-Momma, Amasayithi Woshukela Ubaba Noshukela Wezingane Oku-inthanethi. Uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lwe-Sugar Love Chat & Amawebhusayithi Wokuthanda Ushukela Wokufuna Abathandi Boshukela
Ushukela Momma Ukuqomisana Indawo
Isayithi lokuphola ushukela mummy elifana neSugarlove1 lithandwa kakhulu phakathi kwamawebhusayithi kashukela momma wokuphola futhi liphakathi kwezindawo ezithandwayo zokuphola ushukela mummy. Kunamasayithi amaningi wokuphola ushukela momma, kepha iSugarlove1 ihlala iyindawo eyi- # 1 ehamba phambili yokuthola ushukela momma futhi ngokuvamile ibalwa ngosesho lweGoogle ezindaweni eziphezulu zokuphola ushukela mummy. Izingosi zokuphola ezikwi-inthanethi zezidumbu ezishukela kulula kakhulu ukuzithola kulezi zinsuku, noma kunjalo amasayithi wokuphola ama-momma amahle kakhulu kunzima ukuthola!
Isayithi Lokuqomisana Sabashukela
Qaphela amasayithi wokuthandana kwabashukela ngenxa yokwanda kokukhohlisa kwi-intanethi. Abakwa-scammers abaningi bacashe kumawebhusayithi asoka likashukela kababa abafuna izinhloso ezilula. AbakwaLoti balaba bakhohlisi bazozama ukukukhokhela imali futhi bavame ukuzenza njengabazali bakashukela abafuna ukusebenzisa imali yabo enganeni enoshukela. Musa ukuwela lokho!
Ngakho-ke kubalulekile ukuthola amasayithi wokuphola angcono kakhulu kashukela daddy endaweni eqinisekisiwe ebizwa kanjalo “Usugar daddy meet website” njengeSugarlove1 noma i-SeekingArrangement.com njll. Ngoba, ngoba amasayithi wokuphola akuSugar daddy online njengoba kushiwo aziwa kakhulu ngenkonzo yabo yamakhasimende enhle kakhulu nokuvikeleka online!
Ushukela Daddy Ukuqomisana App
Uhlelo lokusebenza oludume kakhulu lokuphola ushukela daddy lusezandleni zeSeekingArrangement.com, ngoba kukhulunywe ngalo ku-TV kazwelonke nangezinkampani ezihola phambili zezindaba ezifana ne-CNN, Forbes, New York Times, BBC njll. Noma kunjalo, iSugarlove1 App ibalwa phakathi kwezithandani ezinhle kakhulu izinhlelo zokusebenza ukuthola ushukela daddy. Sinikeza ipulatifomu eyingqayizivele ekhuthazwe yi-facebook ngakho-ke siyakufanelekela ukuba seqenjini lezinhlelo zokusebenza zokuphola ukuthola oshukela baba.
Uhlelo lokusebenza lokuphola ushukela lukababa njengoSugarlove1 lungenye yezinhlelo zokusebenza ezimbalwa zikashukela ezisebenza! Njengoba kunezinhlelo eziningi ezibhedayo ezibizwa ngokuthi ama-best dating apps ukuthola ushukela daddy, iSugarlove1 iyazihlukanisa njengohlelo lokusebenza lokuphola lokuhlangana lukashukela olusebenza ngokugcwele olusebenza ngokugcwele. Lokhu kusho nokuthi ngaso sonke isikhathi uma uzithela phezu kohlelo lokusebenza “oluhle kakhulu lokuhlangana noshukela” kuGoogle Play noma ku-Apple Apple Store, kufanele uzizamele bese udlulisa isinqumo sakho.
Amasayithi Okuqomisana O-Sugar Daddies Online
Ungawuthola kanjani umsebenzi onzima ukuthola ukuthi ungathola kanjani ushukela kababa online. Ngakho-ke gwema ukufuna i-online sugar daddy ezindaweni ezinomthunzi ze-Intanethi. Sebenzisa kuphela izinhlelo zokusebenza eziqinisekisiwe ukuhlangabezana noshukela ku-inthanethi. I-online sugar daddy eku-inthanethi kuphela ingahle ibe yinkohliso, ngoba awukwazi ukusho ngempela ukuthi ukusohlelo lokusebenza lwe-sugar daddy langempela ngenxa yezinhlelo zokusebenza eziningi ezingekho emthethweni. Noma kunjalo yenza usesho lwe- "sugar daddy endaweni yami" bese ukhetha lezo ezingacwebezeli kakhulu futhi ezingenathemba endleleni yazo. Solely ngoba kuyindlela engcono kakhulu yokuzivikela kubakhohlisi ku-sugar daddy online ukuphola.
Ushukela Baby Ukuqomisana App
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zezinsana ezinoshukela zitholakala ku-App Stores, nokho iSugarlove1 uhlelo lokusebenza lomntwana olushukela oludume kakhulu. Kuyinto uhlelo lokusebenza lokuphola usana lomntwana olukhula ngokushesha kakhulu. Sinenani elikhulu kunawo wonke lamalungu akhokhelwe / aqinisekisiwe kuhlelo lwethu lokusebenza lokuphola izingane ezinoshukela.
Ushukela Baby Ukuqomisana Iwebhusayithi
Ngezinkulungwane zezingane ezinoshukela ezithandana namawebhusayithi, ukuphola ushukela kwengane online sekuyaziwa kakhulu. Phakathi kwamawebhusayithi amaningi asezingeni lokuba usana olunoshukela, siyi-top top. Futhi ngezinsana ezingama-30.000 zoshukela egameni lethu, iSugarlove1 ingelinye lamawebhusayithi aphambili kakhulu wokuphola ushukela wengane.
Amasayithi Okuqomisana e-Sugar Baby Online
Ungu ngifuna amasayithi ezingane zikashukela aziwa noma afakwe kuhlu njengamawebhusayithi angcono kakhulu wezingane ushukela? Ufike kusayithi elifanele le-ushukela le-inthanethi. Ukuphola kwengane kashukela yi-forté yethu, ngoba sikwenze kwaba lula ukuthola ingane enoshukela. Sinesici sokusesha esithi "sugar baby meet" esaziwa nangokuthi "ushukela baby othole". Ingane enoshukela efunelwa ukuphola iqinisekisiwe ukutholakala kusayithi lethu.
O-Sugarparents baziwa ngokubuza ukuthi "thola ushukela wengane yami" futhi sihlala sibasiza ekutholeni ushukela obhebhethekisiwe online. Amawebhusayithi aphezulu wezingane ushukela ngokuvamile awakwenzi lokho. Ama-Sugardaddies nama-Sugarmommas kuvame ukushiywa bodwa lapho befuna ushukela wengane eku-inthanethi. Thola ushukela oseduze kwami ​​uvame ukucelwa ukuthi uxhase amaqembu ngaphandle kwempendulo. Kungakho kufanele usikhethe njengoba ukhetha ipulatifomu yokuphola kashukela momma. Sibhalwe ku-inthanethi njengenye yamawebhusayithi ahola ushukela momma.
Ukuthola ushukela momma eduze kwami ​​nomtholi kashukela momma kumasayithi wokuphola kashukela angahleliwe kungumbono omubi. Cacisa bese ukhetha amasayithi we-sugar momma ane-sugarbabies afuna ushukela momma. Ungaphelelwa yithemba bese uthumela “ushukela momma uyadingeka”, “ngidinga ushukela momma” noma “ungitholele ushukela momma” kuwebhusayithi yethu noma kuhlelo lokusebenza. Indawo engcono yokuthola i-sugar momma noma “indlela” eqondile ukubhala umlayezo wakho bese uqala ingxoxo yangasese.
I-sugarbabe yake yathumela "ngifuna ushukela momma", ngoba angikwazi ukuthola ushukela momma eduze kwami. Ngidinga ushukela momma manje! Ngenhlanhla siyindawo engcono yokuthola ushukela momma, ngoba sidunyiswa njengewebhusayithi enhle kakhulu kashukela momma. Amaqembu ethu othando likashukela ayindlela engcono yokuthola ushukela momma noma kunjalo. Usesho lwethu lunikeza ukuphola okuphephile nokwasendaweni okushukela momma. Ukwenza "ama-mommas ashukela endawo" ibinzana elisesheke kakhulu. Thola i-sugar momma ngokubhalisa futhi ngeke udinge izindawo ezinhle kakhulu zokuthola ushukela momma ngaphandle kwepulatifomu yethu yokuphola online.
Amawebhusayithi kashukela babahle kakhulu kwabesifazane abasebasha abafuna amadoda avuthiwe. Ngakho-ke izingosi zikashukela daddy ezifana nezethu ziyindawo lapho owesifazane osemusha engathi ngithole khona ushukela wami. Izibalo zikhomba ukuthi amazwe omhlaba wesi-3 angabaholi maqondana nokuthandana kuka-sugar daddy. Kepha kuyaqabukela babe namawebhusayithi kashukela kababa ahamba phambili. Uma ufuna ushukela kababa ke amasayithi wokuphola ushukela we-europian angcono kakhulu.
Imishwana enjengokuthi “ngidinga ushukela kababa” noma “ngithole ushukela” ayeluleki lapho kufunwa ushukela ocebile noma kuthiwa “ngithole ushukela”. Ubaba kashukela wangempela ukubamba, ngakho-ke ungonakalisi usesho lwakho ngokuthumela ngokulangazelela ukuthi ngifuna ushukela kababa. Esikhundleni salokho sebenzisa amasayithi aphezulu kashukela kababa ukuxhumana ngasese nendoda / noma nowesifazane ovuthiwe.
Siphakathi kwamawebhusayithi ephephile kashukela kababa, ikakhulukazi ngenxa yensizakalo yethu yokuxoxa yamahhala nezici zokuphepha. Okuholela kimi ukusho ukuthi lezi zici zokuphepha zengxoxo zamahhala futhi zisibeka phakathi kwamawebhusayithi aphezulu kashukela kababa. Ngokuxoxa nge-inthanethi ungathumela isicelo eqenjini lokusekelwa ngomyalezo olandelayo "thola ushukela wami". Indlela engcono yokuthola ushukela daddy noma ngabe ungokubhalisile okukhokhelwayo. Amasayithi amaningi endawo kashukela nobaba aku-inthanethi asekela ukubhaliswa. Lapho wenza ukusesha gwema imisho enamaphutha afana nokuthi "looking sugar daddy". Esikhundleni salokho zama ukuthi "Ufuna uBaba kashukela"!
Amasayithi Okuqomisana We-Sugar Mummy Online
Isiza sikamama ushukela waseNigeria imvamisa akuyona indawo yokuthola ushukela mummy online. Kodwa-ke iSugar Love App iyisayithi engcono kakhulu yokuphola ushukela kubantu abanesifo esithi "ngidinga ushukela ongumama manje". Siyakuhlonipha ukuphola kukashukela mummy yingakho sinikela nge-premium ushukela mummy iwebhusayithi ukuze uthole ushukela mummy.
Ama-algorithm ethu okusesha akutholela ushukela mummy oseduze uma ufuna ushukela mummy. Xhuma futhi uhlangane noshukela mummy ngokusebenzisa ipulatifomu yethu yokuphola online, uma udinga umama ushukela. Usesho lwethu lukuvumela ukuthi ukopishe unamathisele "thola ushukela mummy eduze kwami", "online sugar mummy manje" futhi "uthole ushukela mummy online" ngaphandle kwenkinga.
Uhlelo lokusebenza lokuphola online olunjengeSugar lover lungenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuphola futhi nakanjani phakathi kwezinhlelo zokusebenza ezithandwa kakhulu zokuphola. Uma ufuna izinhlelo zokusebenza ezinhle zokuphola hhayi izinhlelo zokusebenza zokuphola ezithandwayo kuphela! Ngemuva kwalokho siphakathi kwezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuphola online. Siphinde sagubha futhi sabalwa phakathi kwezinye zezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuphola zabesifazane. Njengohlelo lokusebenza lokuphola lendawo ngaphandle kokuba uhlelo lokusebenza lokuphola lomhlaba wonke nolusetshenziswa kakhulu, siphinde sithathwe njengehlelo lokusebenza eliphakeme lokuphola online. Ukubuyekezwa kwethu kuyazikhulumela!
Sakhe amawebhusayithi amaningi wokuphola eminyakeni edlule, kepha phakathi kwalezi zingosi zokuphola online sikhethe iSugarlove1 njengenye yezindawo ezingcono kakhulu zokuphola esibe nazo. Ngakho-ke uma ufuna amawebhusayithi amahle kakhulu wokuphola usesho lwakho luphelela lapha. Amasayithi wokuphola endawo angamasayithi amahle kakhulu wokuphola online, ngoba bambalwa kakhulu abantu abafuna amalungiselelo phesheya.
Njengesayithi lokuxhumana sivame ukuncintisana namanye amawebhusayithi wokuxhumana. Ezimweni eziningi amasayithi wokuxhuma online awana lutho kithi. Silawula imakethe, ngoba sithathwa njengezindawo ezinhle kakhulu zokuxhuma. Yenza "amawebhusayithi amahle kakhulu wokuxhumana" ku-Google futhi uzothola uhlu olunamasayithi amahle kakhulu wokuxhuma online. Kulolo hlu kufanele ukwazi ukusithola namanye amasayithi wokuxhuma endawo.
Singohlelo lokusebenza lokuxhuma online futhi ohlwini lwezinhlelo zokusebenza oluhle kakhulu lokuxhumana emhlabeni wonke. Njengomholi phakathi kwezinhlelo zokusebenza zokuxhumana ezidume kakhulu, singohlelo lokusebenza lokuxhumana olusetshenziswa kakhulu. Sikunikeza indawo ephephile kuhlelo lwethu lokusebenza lokuxhumana online. Misa ukufuna izinhlelo zokusebenza ezinhle zokuxhumana noma izinhlelo zokusebenza ezidumile, ngoba ususitholile ngokufunda lokhu okuthunyelwe. Hlala wazi ukuthi izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ze-inthanethi akuzona izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu zabesifazane. Siyakuthembisa ukuthi uhlelo lwethu lokuxhumana lendawo lwendawo lukhona.
UJan 27, 2021
USugarlove.one ungixhumanise no-sugar daddy wami. Insiza ehamba phambili
UJan 24, 2021
Njengamanye amadethi, ukuphola kwezitabane kudinga ukupha okuncane
UJan 20, 2021
byUHans Simtanda Caspersen onISugarlove®,
Thanda le bhulogi. Ukubabaza okumangalisayo
Usuku Amalungu Legit Emaqenjini e-VIP!
QAPHELA: Amaphrofayili angenakho okungenhla Amalungu e-VIP ibheji aliqinisekisiwe futhi mhlawumbe alikho emthethweni!
➤ Joyina iBlog
Ingxoxo yamahhala nesilayezi!
Sinqume ukukunikeza i-Free ➤ Chat & Private Messenger Again. Sibone ukuthi ungavele usebenzise vimba / bika inkinobho, uma umsebenzisi ekuthumela ugaxekile noma ezama ukukukhohlisa!
➤ Xoxa Mahhala Manje!
Joyina Amaqembu Ethu eSugarlove1 & Xoxa noma Thumela i-WhatsApp Yakho Ukuthintwa!
➤ Joyina Amaqembu!
Sithinte | Vula i-24/7
Amaphakethe we-Offline we-Offline
Ukusetha kabusha i-Mindset
Ingqondo, Umzimba Nomphefumulo
Qala Izikhathi Zomoya
Umama Wezinkemba Tarot
Isibonelelo Sabantwana Beshukela
Inikezwe amandla yi Ukuvumelana kwe-cookie ye-GDPR
Uma ukhubaza lekhukhi, ngeke sikwazi ukugcina okuthandayo. Lokhu kusho ukuthi njalo lapho uvakashela le webhusayithi kuzodingeka unike amandla noma ukhubaza amakhukhi futhi.